कम्पनी विश्लेषण, बिहीवार, १८ वैशाख २०७१ | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण, बिहीवार, १८ वैशाख २०७१
on: १८ बैशाख २०७१, बिहीबार ००:०० लगानी
कम्पनी विश्लेषण, बिहीवार, १८ वैशाख २०७१
सञ्चालन मिति : २००८
पछिल्लो कारोबार मूल्य : रू. ३८३
५२ हप्ताको उच्च मूल्य : रू. ४७५
५२ हप्ताको न्यून मूल्य : रू. २३५
शाखा : २७
अध्यक्ष : नन्दकिशोर राठी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : उपेन्द्र पौड्याल
– एनएमबी बैङ्कको शेयरमूल्यको मैनबत्ती रेखाचित्रले शेयरमूल्यमा सामान्य उतारचढाव भइरहेको देखाएको छ । रेखाचित्रको अन्तिममा कालो लामो पुच्छर भएको मैनबत्ती बनेको छ । यसले अन्तिम दिन शेयरमूल्य घटेको जनाउँछ । यसले बजार थप घट्न सक्ने सङ्केत गर्छ । किनभने पछिल्लो समयको मैनबत्ती विश्लेषण हेर्दा प्रत्येकपटक बजार बढेपछि पुनः बजार घटेको देखाएको छ ।
– यस बैङ्कको शेयरमूल्यको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) अहिले ४० स्केलमा रहेको छ । यसले बैङ्कको शेयरमूल्य न्यूट्रल जोनमा रहेको तथा बजारमा शेयरको खरीद तथा विक्री चाप बराबरजस्तै रहेको देखिन्छ । यतिबेला बैङ्कको शेयरमूल्य केही घट्ने सङ्केत देखिए पनि अन्य आधारभूत तथ्यहरूलाई विश्लेषण गरेर लगानीको निर्णय गर्न सकिन्छ ।
– बैङ्कको शेयरमूल्यको स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन रेखाचित्रले केही पहिला शेयरमूल्यमा उच्च उतारचढाव भएको देखाएको छ । तर, अहिले यो पुनः स्वाभाविक तहमा आएको छ । यसले अहिलेको अवस्थामा यस बैङ्कको शेयर खरीद गर्दा खासै जोखीम नभएको देखिएको छ ।
– गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बैङ्कको खुद नाफा १३ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढेर रू. ३० करोड नाघेको छ । यो चुक्ता पूँजीको १५ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत हो । समीक्षा अवधिमा बैङ्कले अल्पकालीन लगानी तथा सञ्चालन मुनाफा बढाएपछि खुद मुनाफा बढ्नमा टेवा पुगेको हो ।
– समीक्षा अवधिमा बैङ्कको अल्पकालीन लगानी २३ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेर लगभग रू. २० अर्ब पुगे पनि दीर्घकालीन लगानी भने १८ प्रतिशतले घटेको छ । सो अवधीमा बैङ्कको निक्षेप भने २८ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेर रू. २५ अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।
– बैङ्कको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा ब्याज खर्च उच्च दरमा बढ्न गई खुद ब्याज आम्दानी मात्र १ दशमलव ६४ प्रतिशतले बढेको छ ।
– बैङ्कको ब्याजबाहेक अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा भएको वृद्धिका कारण सञ्चालन मुनाफा १० दशमलव ७६ प्रतिशतले बढेर रू. ३८ करोड ७७ लाख पुगेको छ । सोही अवधिमा कर्मचारी खर्च ३० दशमलव ९७ प्रतिशत र अन्य सञ्चालन खर्च ३७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले बढेको छ ।
– समीक्षा अवधिमा बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा लगभग आधा प्रतिशत बिन्दुले घटेर १ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झरेको छ । फलस्वरूप सम्भावित जोखीम व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइएको रकम लगभग २३ प्रतिशतले घटेको छ ।